The "Unboxings" ugu horeysay ee cusub ee 24-inch iMac muuqan | Waxaan ka socdaa mac
Markii ugu horeysay "Unboxings" ee cusub ee 24-inji ah ee iMac ayaa soo muuqanaya
Berri oo Jimce ah waa maalinta ay Apple u qoondeysay shirkadaha xamuulka inay bilaabaan bixinta amarada ugu horreeya ee cusub 24-inji iMac. IMac-kii ugu horreeyay ee waaga cusub Apple Silicon.
Laakiin sida caadada u ah soosaarka cusub ee Apple, shirkaddu waxay qalabkan cusub si toos ah ugu rartaa qaar ka mid ah "lagu xiray." Shirkadaha caanka ah ee YouTubers iyo farsamayaqaanada warshadaha ayaa durba helay iMac-ka cusub, waxayna si deg deg ah ugu dhajiyeenSanduuqyada»Kanaalladaaga caadiga ah. Aan aragno waxa ay ka qabaan iMac midabbada leh.
Qaarkood YouTubers iyo dhaleeceeyayaasha caanka ah ee waaxda tikniyoolajiyadda ayaa durba helay iMac cusub oo 24-inch ah oo wata processor-ka M1. Dadka intiisa kale ee horey u dhigay amarkooda, waxay bilaabi doonaan inay helaan laga bilaabo berri.
Oo sidii caadiga ahaydba, qof kastaa wuxuu u orday inuu noqdo kii ugu horreeyay ee daabaca «unboxing»Midabada iMac. Aynu aragno dareenka ugu horreeya ee ka imanaya gudaha Apple.
René Ritchie wuxuu u sharxayaa iMore in tijaabooyinkiisii ​​ugu horreeyay ee cusub M1 processor Way fiican yihiin. Wuxuu leeyahay xilligan cusub ee Apple Silicon wuxuu sare u qaadayaa iMac heer kale oo aan horay loo arag.
Kuwa ugu caansan ee loo yaqaan 'YouTuber' ee ku jira koonka Apple ayaa horeyba uga helay iyaga midabada oo dhan la heli karo Oo sidee bay noqon kartaa si kale, wuxuu u doortay midabkiisa uu ugu jecel yahay.
Morrison ayaa sidoo kale la dhacay xawaaraha processor-ka M1 ee iMac-ka cusub. Waxay sidoo kale xoojineysaa horumarka la taaban karo ee kamarad hore, taas oo aad uga maqnayd Apple Macs.
Dabcan, Marques Brownlee wuxuu sidoo kale si dhakhso leh u helay iMac cusub, wuxuuna sidoo kale ku deg degay inuu daabaco dareenkiisa ugu horreeyay. Aad ayuu ugu farxay waxa cusub Naqshadeynta dibedda. Wuxuu sheegay inuusan mar dambe la yaabin xawaaraha processor-ka cusub ee M1, maadaama uu horey uga ogaa wixii hore ee Apple Silicon Macs.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Kombiyuutarada Mac » iMac » Markii ugu horeysay "Unboxings" ee cusub ee 24-inji ah ee iMac ayaa soo muuqanaya
AirPods, AirPods Max, iyo AirPods Pro ma taageeraan maqal la'aanta Apple Music